kwan dai thet thi: အအီးချချမ်းနီ၊ ငါပြောရေပိုင်လုပ်၊ ငါလုပ်တေပိုင် လိုက်မလုပ်ကေ့!
Lagt inn av kwan Dai Thet Thi kl. 09:13